पत्थर कुँदेर जीवन चलाउने कुशवडिया - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
आहा ! जिन्दगी
ब्युटी एण्ड फेसन
सम्पादकीय अन्तर्वार्ता फिचर समाचार सार प्रविधि फोटोकथा मेरो घर
© 2022 Mero LifeStyle
सम्पादकीय टिप्पणी अन्तर्वार्ता फिचर समाचार सार प्रविधि फोटोकथा मेरो घर अतिथि कलम धर्म/संस्कृति अन्तर्राष्ट्रिय विकेण्ड नरनारी अजिव दुनियाँ
सलमानको कार्यक्रमको टिकट विक्री भएन, के उनको क्रेज घटेको हो…
प्रेरक अनि उत्प्रेरक
दश महिनामा ३७ अर्बको मोबाइल फोन आयात
‘जनताको सुख दुःखको सारथी बन्छु भनेरै राजनीतिमा होमिएको हुँ’
‘अब भरतपुर स्मार्ट सिटी बन्ने छ’
‘शंखरापुरमा जनताले गुनासो गर्ने दिन गए, अब नगरपालिका सिस्टममा चल्छ’
यसरी गर्नुहोस् घण्टौँसम्म सेक्स
कठोर गुरू, मिलनसार मित्र
नटेर्ने, नझुक्ने, तेक्वान्दो नछोड्ने
चलचित्र विकास बोर्डमा सम्झनाको सम्भावना
पत्थर कुँदेर जीवन चलाउने कुशवडिया
सरिता थारू || 30 March, 2021
बुटवलका २६ वर्षीय घनश्याम कुशवडिया, विगत आठ वर्षदेखि सिलौटाको व्यापार गर्दै आएका छन् । बाबु बाजेको पालादेखि गर्दै आएको यो काम आफ्नो पुर्ख्याैली पेशा रहेको उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंमा व्यापार गर्दै आएका घनश्यामले सिलौटा बनाउन १२ वर्षको उमेरमा नै सिकेका हुन् । उनकी आमाले पनि उनलाई काममा सघाउँछिन् । उनको थर कुशवडिया भए पनि पत्थर अर्थात् ढुङ्गा काट्ने काम गर्दागर्दै नामको पछाडी ‘पत्थरकट्टा’ जोडिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिलौटा बनाउन बुटवलको तिनाउ खोलाबाट कालो ढुङ्गा ल्याउँछन् । एक लटमा ३ देखि ४ सय सिलौटा बन्ने ढुङ्गा ल्याइन्छ । नदीबाट ढुङ्गा ल्याउँदा गुणस्तर र साइजअनुसार पैसा तिर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सिलौटाको प्रकारअनुसार मूल्य
चाबहिलको सडक किनारमा बसेर घनश्यामले चारपाते सिलौटा, चारपाते खल, अण्डाकर खल, ओखल, सिलौटाको लोरी, जाँतो बनाउँछन् ।
उनले बनाएको चारपाते सिलौटाको १ हजारदेखि १५ सय, अण्डाकार खलको ५ सयदेखि १५ सयसम्म पर्छ । यसैगरी ओखलको मूल्य ८ सयदेखि २५ सयसम्म पर्ने गरेको छ । उनले बनाएको फुलबुट्टे जाँतो २५ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
यसरी चाबहिलको सडक किनारमा बसेर ढुंगाको सिलौटा, जाँतो बिक्री गरेर उनी मासिक १५ हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् । ४५ वर्षीय महेन्द्र कुशवडियाले घनश्यामले आफ्नो कमाइबारे भन्न लजाएको बताए । पुर्ख्याैली पेशा भएकाले बच्चैबाट यो पेशामा संलग्न रहेका महेन्द्रले दैनिक तीनदेखि चार हजारको व्यापार गर्छन् । उपत्यकामा १६ वर्षदेखि यही सिलौटाको व्यापार गर्दै आएका उनी कमाइ राम्रो भएको बताउँछन् ।
गाह्रो छ सिलौटा बनाउन
घनश्यामका अनुसार सिलौटा बनाउन गाह्रो छ । एकछिन पनि खाली नबसेर उनलाई फुलबुट्टाले भरिएको ओखल र जाँतो बनाउन २ देखि ३ दिन समय लाग्छ । त्यसो त चारपाते सिलौटा, लोरी र खल बनाउन भने एक घण्टामै सक्छन् ।
उनी सिलौटा बनाउन छेनी, हथौडा लगायत ७ किसिमका फलामका औजार प्रयोग गर्छन् । ठूलो पत्थर फुटाउन प्रयोग हुने छेनीलाई गोट्टा भनिने उनले बताए ।
भारतबाट पनि ल्याइन्छ ढुङ्गा
चाबहिल क्षेत्रमा मात्रै एक दर्जन बढीले यो व्यापार गर्छन् । यसैगरी वनस्थली, नयाँ बसपार्क, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रमा पनि यसको व्यापार हुने गरेको छ ।
सिलौटा बन्ने पत्थर बुटवलबाट मात्र नभई भारतको गोरखपुरबाट पनि ल्याइने महेन्द्र बताउँछन् । बहिरबाट ल्याएको पत्थरको सिलौटा चिल्लो, रातो र राम्रो हुने भएकाले केही महंगो पर्ने उनी जनाउँछन् । त्यसैगरी सादा सिलौटाभन्दा बुट्टा भरेको सिलौटा महँगो पर्छ ।
भर्खरै गरिएका प्रतिक्रिया
सलमानको कार्यक्रमको टिकट विक्री भएन, के उनको क्रेज घटेको हो ?
बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । शनिबार (जेठ १४) दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको सांगीतिक कार्यक्रम
कुरा सन् २०१३ जुलाईको हो । तुलसी दाइको एक शिष्यले फोनमा सुनाए, ‘हङकङ राष्ट्रिय तेक्वान्दोको प्रमुख प्रशिक्षकमा हाम्रो गुरु चयन
‘गरिबीको रेखामुनी रहेका सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न र विकासको मूल फुटाउन फेरि आएको छु,’ यो भनाई बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका । स्थानीय निर्वाचनमा धेरै चासोका रुपमा रहेको यो महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, तर पुरानै अनुहार ।
सलमानको कार्यक्रमको टिकट विक्री भएन, के उनको क्रेज
७२९ पालिकामा मतगणना सम्पन्न
७०५ पालिकाको मतगणना सकियो
जन्तीलाई ढिलो खाना आएपछि भयो हंगामा
‘अब धनगढीले कसैको कार्यकर्ता पाल्नुपर्दैन, न्यायपूर्ण विकास हुन्छ’
सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता नं: ०००४३
ठेगाना: टोखा न.पा वडा नं. ९, गोंगबु, काठमाण्डौ
विज्ञापनका लागि सम्पर्क: [email protected]
फोन नं.: +977-01-5909487
© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित Mero LifeStyle